Factory Tour - Linqing Xinri nkenke Iburu Co., ltd.
LINQING XINRI ECBỌCH BE na-agba CO., LTD. bụ ezinụlọ pụrụ iche na-amị emeputa kemgbe afọ 2006, anyị na nkà ihe ọmụma: nweta ntụkwasị obi site ime ihe n'eziokwu, merie site na àgwà, ịzụlite site ọhụrụ, na-eme ka anyị onwe anyị ohere site ihe enterprising mmụọ.
Site na ahia ahia kwa afọ nke ihe karịrị US $ 150 nde na ikike ụlọ kwa afọ nke ihe karịrị nde 7000, na akụrụngwa na-agwakọta ihe karịrị 2 nde ụkwụ abụọ, XRL bụ otu n'ime ndị na-emepụta ihe kachasị mkpa n'ụwa. N'ezie, XRL ereworị na ihe karịrị mba 120 gburugburu ụwa.
Site na nkwonkwo aka nke ndị ahịa niile nke XRL na-agba, anyị ebupularịrị na mba 120 n'ụwa niile.
A na-ahụkwa XRL maka ọkwa kachasị elu, nzaghachi, ọrụ 24/7/365 - a na-aza ozi ịntanetị na ozi olu ọ bụla n'ime awa isii, ekwela nkwa!
Ihe Ndị Ahịa Na-ekwu
XRL Co., nwere ndị otu teknụzụ siri ike na injinia Japan iji dozie nsogbu dị iche iche na ntinye na ojiji nke biarin anyị.
Anyị nwere ndị ọrụ aka iji rụọ ọrụ. Na anyị nwere ike dị ka gị Eserese ma ọ bụ gị chọrọ omenala mere mmepụta.
Ewezuga ahịa ụlọ, ebugharịrị XRL ebubatala na mba 120.
K na-atụ anya imekọ ihe ọnụ na ndị nrụpụta mepụtara oke bekee. Ọ kwesịrị iji ndozi XRL dochie SKF biarin na ahịa njedebe
Anyị nwere ekele maka ntụkwasị obi ya, ọ naghị ekwu ọtụtụ okwu ma tinye iwu ikpe n'aka anyị. Ọ na-ewere àgwà dị mkpa ma anyị nwere otu uru na nke a.
Mgbe ikpe gachara, o tinyela ọtụtụ iwu n'aka anyị ọzọ, anyị na-ekwu na iwu ọhụrụ na-abịa n'oge na-adịghị anya.
Anyị nwere ebumnuche ịzụlite ya ka ọ bụrụ onye nnọchi anya ụdị XRL anyị na Pakistan.
Russia bụ nnukwu ahịa oriri. Mana dị ka iwu mgbochi ịkwụsị, ọ bụ nnukwu nsogbu nye ndị ahịa si China mbubata. Dị ka ọtụtụ afọ na-enwe imekọ ihe ọnụ na Russian enyi na ndị mmekọ, anyị nwere tozuru okè mbupu forwarder nwere ike ime ka iga si Malaysia ma ọ bụ Thailand, ọ nwere ike ịzọpụta a otutu maka ahịa. Anyị nwere ike ịme Thailand na Malaysia CO maka ndị ahịa iji mee nhichapụ omenala.
Mmekọrịta Africa na anyị dị mma dị ka nke dị n'etiti ndị ikwu dị anya na ndị agbata obi dị nso. Na mbido, J bidoro site na mpempe akwụkwọ ole na ole iji nwalee ogo na nzaghachi ahịa. Mgbe e mesịrị, ọ mụbara iji ọtụtụ oge mgbe oge, Ọbụna na kacha sie ike oge nke coronavirus na April 2020, ọ na-etinye otu iwu ka anyị, anyị na-otú ekele maka nkwado si ya. Dị ka nnukwu mma na ịma mma nke XRL biarin, e rere ya ngwa ngwa n'ime ụbọchị ole na ole mgbe ọ bịarutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ.
N bụ onye nnọchi anya anyị na Peru, ọ bụkwa ya bụ onye nnọchi anya izizi anyị na mba South America. Malite na obere obere iwu wee nyefee LCL, Ma ugbu a, ọ nwere ike ịtụnye akpa 1 * 40FT kwa ọnwa. Ugbu a, anyị abụghị naanị onye anyị na ya na-azụ ahịa yana ezigbo ndị enyi na ndụ.
Maka ịbụ onye nnọchi anya anyị na akara XRL, anyị na-enye ya onyinye mgbasa ozi n'efu, dị ka pen na T-shirts na XRL LOGO, anyị na-enyekwa nchebe ahịa na ọrụ ọkachamara kachasị mma, Anyị na-etolite ahịa aka na aka. Anyị tụkwasịrị ya obi na ọ ga-abụ onye ọrụ kachasị na mba South America na nso nso.
Anyị na-ezukọ na ihe ngosi Shanghai 2016. Anyị na-eme OEM na ika ya maka T, O nwere ezigbo iwu nke ọ bụla n'afọ ọ bụla ma biarin na-ere nke ọma na ahịa Ukraine.
Y si Ukraine, Ọ na-emekọ akpaaka akụkụ ahụ mapụtara azụmahịa na mpaghara, ọ gara China ọtụtụ ugboro kwa afọ na-eme ka zuo, ọ tumadi nyere anyị iwu biarin ika LADA, VPZ, VBF, SPZ wdg.
M hụrụ anyị site na ebe nrụọrụ weebụ nke ụlọ ọrụ, ma tinyela 5 iwu unitil ugbu a. Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ nke iwu adịghị nnukwu, ọ nwere nnukwu ikike maka mmepe. Ọzọkwa, N'ihi naVietnam n'ahịa, anyị nwere ahụmahụ dị ukwuu maka ahịa a, na-atụ anya na a ga-ebuli elu dị elu, anyị nwekwara ike ịnye ha akwụkwọ ikikere COPE iji nyere ha aka ịme nhichapụ omenala na ọrụ mbubata ala.
Mee 2016 Shanghai Everbright Exhibition XRL bear
Septemba 2016 Shanghai World Expo XRL
2016 Mgbụsị akwụkwọ Canton Fair XRL agba
Septemba 2017 Shanghai World Expo XRL
2018 Shanghai World Expo XRL agba
2018 Shanghai World Expo XRL na-ebu
Akụrụngwa ụlọ ọrụ
Nkwakọba ụlọ ọrụ